Alahady 01 Marsa 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
ALAHADY 01 MARSA 2020 - ALAHADY FANDRAISANA
“Miverena amin'ny Tompo Andriamanitrao"
« Ary hoy Jehovah tamiko: Isiraely mpiodina dia hita fa marimarina kokoa noho Joda mpivadika. » (Jeremia 3:11)
Alahady voalohany amin’ny volana androany ary hibanjinana lohahevitra vaovao indray dia ny hoe « Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrao ». Ny mpitandrina miana-draharaha Razafinarivo Andriantsilavina Nofy no nitarika ny fotoana. Ny Diakona Rajaoarisoa Herizo sy Rambeloson Mitsoa, ao amin’ny Vaomiera asa vavolombelona no nanao ny vavaka sy ny famakiana ny tenin’Andriamanitra. Ny mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny fampianarana. Ny litorjia amin’ny endriny voalohany no nitondrany ny fotoana.
Toy ny alaahdy voalohany amin’ny volana rehetra dia nisy ny fiarahabana sy fitrotroana am-bavaka ireo mpianakavin’ny finoana nanana ny fingerin-taonana nahaterahany ny volana lasa.
Ho fiderana an’Andriamanitra dia novakiana ny Salamo 22 :22-28. « Hitory ny anaranao amin’ny rahalahiko aho; eo amin’ny fiangonana no hideràko Anao. Hianareo izay matahotra an’i Jehovah, miderà Azy. Fa tsy manao tsinontsinona na marikorikon’ny fahorian’ny ory Izy, ary tsy mba manafina ny tavany aminy; fa raha mitaraina aminy ireny, dia mihaino Izy. Avy aminao no ahazoako manao fiderana eo amin’ny fiangonan-dehibe; ny voadiko dia hefaiko eo anatrehan’izay matahotra an’i Jehovah. Hihinana ny mpandefitra ka ho voky; hidera an’i Jehovah izay mitady azy; ho velona mandrakizay anie ny fonareo. Hahatsiaro ka hiverina ho amin’i Jehovah ny faran’ny tany rehetra; ary hiankohoka eo anatrehanao ny fokon’ny firenen-tsamy hafa. Fa an’i Jehovah ny fanjakana; ary manapaka amin’ny firenen-tsamy hafa Izy. » Natao ny hira Ffpm 241 : 1, 2, 3 ary taorian’izay dia nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana ny mpitarika.
SITRAPON'ANDRIAMANITRA SY VAVAKA FIFONANA
Nanambara ny sitrapon’Andriamanitra ny mpitandrina nitarika ny fotoana noraisiny tao amin’ny Hosea 14:2-3 « Ry Isiraely ô, miverena amin’i Jehovah Andriamanitrao, fa lavon-keloka ianao. Mitondrà teny ianareo, eny, miverena amin’i Jehovah, ka manaova aminy hœ: Mamelà ny heloka rehetra, ary raiso izay tsara, ka dia haterinay ho fanatitra ny molotray. » ary rehefa izany dia natao ny Ffpm 164 : 1, 2, 3. Nanao ny vavaka fifonana izy satria dia nahatsapa fa tsy nahatanteraka izany sitrapon’Andriamanitra izany.
Natao ny Ffpm 451 : 1,2 ary nambaran’ny mpitarika ny teny famelan-keloka nalainy tao amin’ny II Tantara 15:4 d, Deot.30:2 a,b Sal.103:3a « Fa raha niverina tamin’Jehovah, ka nitady Azy, dia nahita Azy. Ka miverina amin’i Jehovah Andriamanitrao sy mihaino ny feony amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, Izay mamela ny helokao rehetra, Izay manasitrana ny aretinao rehetra, » Nambarany avy eo fa voavela heloka noho ny Anarany Masina. Miderà ny Tompo. Nohiraina ny Ffpm 461 : 1,2,3 ary ho fanavaozana ny finoana dia niara-nanonona ny fanekempinoana laharana voalohany ny mpiara-mivavaka rehetra avy eo.
Nisy feon-javamaneno rehefa vita izay tapany voalohany izay.
Niroso tamin’ny fotoana ho an’ny ankizy. Rtoa Raharintsalama Hantanirina no nitarika ny fotoana. Ny teny tao amin’ny Jakoba 4 : 8a no nitondrany ny hafatra ho an’ny ankizy. « Manatona an’Andriamanitra dia hanatona anareo Izy ».
Tokony hankasitraka isan’andro isika. Tokony mivavaka, manaiky, ary misaotra amin’ny fiainantsika isan’andro isan’andro. Nanao ny hira Ffpm 272 :1 ny ankizy, mpampianatra, raiamanadreny.
Nanao ny anjara hirany ny Taniketsa « Vonjeo izahay » taorian’izany.
Nanambara ny raharaham-piangonana ny sekretera Rtoa Rakotomanana Andry ary anisan’ny voalazany tamin’izany ireto manaraka ireto.
Aro riaka : Ny foibe dia manentana amin’ny asa fiantohana izay tanterahin’izy ireo, na fiara, na fivoahana any ivelany sns. An’ny foibe Fjkm izany asa izany ka afaka manatona ny foibe Fjkm izay mikasa hanao izany
Hanatanteraka asa fiaraha mientana ny sampana dorkasy, ARM
Nambara ireo asa rehetra mety hitranga amin’ity volana Martsa ity.
Ny 8, dia misy ny asa sy fampaherezana
Ny 6, dia fampianarana ny bokin’i Jaona ataon’ny mpitandrina Raharijaona Solofo
Ny 14 fiofanana tompon’andraikitra eto amin’ny fitandremana : sampana, sampan’asa ary asa. Entina amin’io ny bokimbola sy Pv rehetra
Ny 16 au 22, dia herinandron’ny Staf
Hisy ny lasy fitoriana atao amin’ny ankizy rehetra latsaka ny 15taona : ankizy miara milalao
Mitohy hatrany ny fitoantoka, ho famangiana ireo tokantrano eto Amparibe
Ny fanavaozana ny lisitry ny mpiara mivavaka eto amparibe izay ho zaraina manomboka anion y taratasy ho fenoina ary ho averina amin’ity volana ity
Ny rakitra sy voady tamin’ny herinandro dia nitotaly ho 2 146 000 ar
Hisy ny fivoriambe roa SMZM ny 7 Martsa amin’ny 10 ora ary ny Hasin’ny Famonjena ny 7 Martsa hariva amin’ny 2 ora 30.
Hisy ny sehatra ho an’ny ankizy karakarain’ny sekoly Alahady mandritra ny fandraisana fanasan’ny Tompo
FANENTANAN'NY MPITANDRINA SY FIARAHABANA IREO NANANA TSINGERINTAONA
Nanao fanentanana ny mpitandrina taorian’izany ary nohamafisiny ireto manaraka ireto :
Fiofanana tompon’andraikitra amin’ny Sabotsy 14 Marsa
Zoma 6 Martsa, Tohin’ny fampianarana ataon’ny Mpitandrina momba ny Filazantsaran’i Jaona
Fetin’ ny taranaka, mbola amin’ny volana Jona, nefa kosa dia nanao fanentanana sahady izy satria dia ho atao amin’ny endrika hafa izany
Ny fitohizan’ny Fitoantoka
Fiarahabana ireo toerana febroary. Ny Isaia 61 :10 no teny nentiny tamin’izany ary nanao rakitra tsingeritaona izy ireo. Niisa 66 ireo nanao rakitra tsingeritaona
Fiarahabana ireo teraa febroary. Ny Isaia 61 :10 no teny nentiny tamin’izany ary nanao rakitra tsingeritaona izy ireo. Niisa 66 ireo nanao rakitra tsingeritaona
Maro ireo mpianakavin’ny finoana nanao raki-boady sy raki-pisaorana. Ireto avy ireo hira nangatahana : Ff19 : 1, Ffpm 3 :1, Ffpm 462 :1, Ffpm 579 :1, Ff20 :1, Ffpm 354 :, Ff16, Misaotra anao izahay (Saholy Malala).
Natolotra ny rakitra ka ny Ffpm 150 :1,3 no nohiraina tamin’izany.
Natao ny vavaka mialoha ny vakiteny. Ny perikopa anio moa dia ny Jeremia 3 : 11-17, Matio 11 : 20-24, Asan’ny Apostoly 26 : 19-23.
Natao ny Ffpm 487 : 1, 3 mialoha ny hafatra.
Ny bokin’i Jeremia 3 :11 no nitondrany ny hafatra « Israely mpiodina dia hita fa marimarina kokoa noho ny Joda mpivadika ». Misy teny roa no hita eto sy hitondran’ny mpitandrina eto dia ny « Miodina sy mivadika ».Samy fahadisoana ireo teny roa ireo fa ny lanjany no samihafa. Izay no ambaran’i Jeremia eto mba hitoriany ny amin’ny fibebahana, Efa betsaka no hanaovan’i Jeremia izao teny izao, rehefa mahita firenena miodina izy.
Ny miodina tiana ambara eto dia hoe miodina tamin’i Jehovah Andriamanitra. « Shabah ». Nanalavitra Azy, tsy nitoetra tamin’ny fahamarinana.. In-939 no niverenan’izany teny izany. Inona no nitranga. Mbola tao amin’ny tany izay nonenany izy dia tsy mba nanao izay sitrak’i Jehovah. Nandeha nijangajanga tamin’ny toerana hafa ireo.
Izany fitodihana ataon’Israely izany dia nampalahelo an’Andriamanitra. Nanao antso mafy mihitsy Jeremia noho izany. Ny famaizana nomen’i Jehovah azy ireo dia ny mba hampiverenena azy ireo ao amin’i Jehovah.
Ny Matio 11 :20-22, dia milaza fa rehefa miverimberina ny fananarana dia efa hanasazy amin’izay Andriamanitra. Ireo toerana ao amin’ny Matio ireo dia nanaovan’i Jesoa asa tsara nefa dia tsy nandray izany ireo (Tyro sy Sidona). Efa nanana ny laza ratsiny izany io toerana io.
Ny dikan’ny mivadika dia hoe « Baghad ». Entina milaza izany fa efa mahalala ny faharatsiana sy ny fahavoazana amin’ny ratsy atao nefa dia atao ihany. Izay efa nataon’ny Isiraelita no mbola nataon’ireto Joda ireo. Tena fanaovana tsinontsinona an’Andriamanitra izany.
Joda dia anisan’ny firenena nahatezitra an’Andriamanitra. Tsy mba naka ohatra ireo fa vao maika nataony ihany. Mbola mora ny loza nanjo an’i Sodoma noho ny nanjo an’ity Kapernaomy ity. Ahitana izany fa mafy kokoa ny fitsarana hahazo ny olona izay mahalala nefa mbola mandika izany ihany.
Tokony handraisantsika lesona izany. Isak’alahady isika dia mandray ny antson’ ny filazantsara. Ny fahatezeran’Andriamanitra mirehitra no hihatra amintsika raha mbola mandika ny lalany foana isika. Tsy misy famindrampo ho an’ireo raha ny teny voalaza.
Inona avy no mety ho ateraky ny fivadihana amin’Andriamanitra?
Araka ny fandinihina nataon’olona dia misy fahotana fito mampiodina ny olona : mirenty sy mamiratra, hakamoana, hatendankanina, faniriandratsy, fieboheboana, fahihirana, fahatezerana sy faharomotana. Raha manana ny iray amin’ireo toetra ireo izany izany dia tsarovy fa mampiodina anao amin’Andriamanitra ireo ary misy devoly miaraka amin’ireo toetra ireto. (Henoy ny hafatra dia ho fantatrao izany). Rehefa ireo no manjaka dia tsy miditra ao anatinao mihitsy ny Filazantsara na dia hisy fitoriana mahery aza.
Tokony manao toy ireo apostoly isika. Paoly rehefa nandray an’i Kristy dia niova, nitory Azy foana na oviana na oviana ary na aiza na aiza. Ny asa nataon’i Paoly dia nitondra ambavaka ireo olona hitoriany ireo mba hitoetra ao amin’ny Tompo.
Isika rehetra ary hoy ny mpitandrina dia tokony hitodika ka hifanatrika amin’Andriamanitra hatrany hatrany.
Nanao ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena « Meteza Ray ô » taorian’ny hafatra.
Niroso tamin’ny vavaka fangatahana ny mpitandrina ary nanambarany fa misy foana ny antson’Andriamanitra mba hiverenana Aminy. Nentiny am-bavaka ny mpitondra Fiangonana, ny mpitory ny Filazantsara hahatanteraka ny asa, ny Kristiana rehetra. Apetraka Aminao, hoy izy, ny fanekenay, ny fahaizanay hiverina Aminao. Nitondra am-bavaka ny mpianatra Setela izy, izay miomana ny ho mpitandrina, ny fanohizana ny fitoantoka, ny fiofanan’ny tompon’andraikitra, ny fetin’ny taranaka. Nivavaka izy ho an’ny sahirana, ny marary, ny mana-manjo, ny voan’ny tsindry hazo lena mba hahita fitia. Nentiny am-bavaka ireo rehetra izay nanao voady sy nanana hataka manokana. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.
Natao ny Ffpm 623 : 1, 3, notonina ny tondrozotra ary notolotry ny mpitandrina ny tsodrano. Ny hira ffpm 545 : 1, 2, 3 no namaranana ny fotoana. Amin’ny maha-alahady voalohany ny fotoana dia nisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.
Rabiazamaholy Hery Lanto no nitendry ny orga ary ny mpitendrin’ny Sampana Mpiangaly Zavamaneno no nanao ireo feon-javamaneno. Rakotonarivo Vatsy no niandraikitra ny fafana. Rabemananaoro Jonathan no nikirakira ny fanamafisam-peo sy nandray feo ny toriteny. Ny Diakona nitaty sy nanisa rakitra, nampandray ary nanasa kapoaka dia ny Vaomieran’ny Aim-panahy sy Fifandraisana. Ny Vaomieran’ny Asa Vavolombelona no niandraikitra ny fiandrasana ny varavarana.